Maxkamad Ku Taala Maraykanka Oo Amartay In La Soo Celiyo Qoys La Tarxiilay Iyo Asbaabaha Ay U Adeegsatay
(Hadhwanaagnews) Friday, August 10, 2018 11:31:47
Garsoore ku sugan dalka Maraykanka ayaa amray in hooyo iyo gabadheeda dib loogu soo celiyo Maraykanka, kuwaad oo la tarxiilay xilli weli ay socotay dhagaysiga racfaan ay ka qaateen dacwad ka dhan ah oo dalka looga saarayay.
Labadan qof ayaa waxaa matalayay hay'adda ACLU ee xuquuqda aadanaha u dooda, kuwaas oo sheegay in labadan dumar ah ay ka soo carareen xaalado adag oo xadgudubyo galmo ah oo ay ku wajahayeen dalkii ay ka yimaadeen.
Garsooraha ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wax aanan la aqbali karin in la tarxiilay iyada oo uu racfaankooda socdo.
Xaakimka ayaa sidoo kale sheegay in xeer
illaaliyaha guud Jeff Sessions loo qabsan karo dacwad la xidhiidha amar diido go'aan maxkamadeed.
Jess ayaa bishii June wax ka badalay sharciga soogalootiga Maraykanka, waxaana qodobada uu wax ka badalay ka mid ah in dadka dhibbanayaasha u ah xadgudubyada galmada aysan u qalmin in la siiyo magangalyo.
Reerkan go'aanka laga gaaray ayaa loo tarxiilay dalka El Salvador ka hor intii aanan dacwadooda magangalyo doonimada la dhamaystirin.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ay tixgalinayaan amarka maxkamadda, soona celinayaan qoyskii la tarxiilay.